एमालेमा विवाद– केपी ओलीले बेवास्ता गरेको माधव नेपालको त्यो ६ बुँदे म्यासेज - Dainik Online Dainik Online
एमालेमा विवाद– केपी ओलीले बेवास्ता गरेको माधव नेपालको त्यो ६ बुँदे म्यासेज
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीलाई बलियो बनाउन ६ वटा प्रस्ताव गरेको भएपनि अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरेको बताएका छन् ।
बुधबार(आज) बाट ललितपुरमा सुरु भएको आफू पक्षधर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा नेता नेपालले ६ बुँदे म्यासेज बालुवाटार पठाएको भएपनि ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काइदिएपछि आफूहरु अध्यक्षले बैठक बोलाउँछन् कि भनेर कुरेर बसेको तर वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
बैठक बस्ने आशा गरेर ६ बुँदे म्यासेज पनि पठाएको तर आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरुलाई राखेर निर्णय भएको उनले बताए ।
पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान, पार्टीलाई विधी र पद्दतीबाट चलाउन छलफल गर्न खोजेको भएपनि ओलीले त्यसलाई लत्याएको उनको आरोप थियो । बैठक बस्दा अल्पमतमा पर्ने डरले गर्दा आफू पक्षधरहरुलाई मात्र खबर गरेर विधी विधान विपरित निर्णयहरु गरेर पार्टीलाई विग्रह तर्फ लगिएको उनको आरोप थियो ।
भेलामा नेता नेपालले आफूले बालुवाटारमा पठाएको ६ बुँदे म्यासेज उल्लेख गरेका थिए ।
१. एकता हुनुभन्दा पूर्वको एमालेको संगठनात्मक संरचना, राजनीति, वैचारिक मान्यताहरु, त्यसका सबै नेतृत्वहरु र सबै सदस्यहरु यथावत रहनेछन् । यहीँबाट प्रास्थान विन्दु हुनेछ ।२.अबदेखि पार्टीलाई विधि र पद्धतीको आधारमा, संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन/परिचालन गरिनेछ ।
३. पार्टीका बैठकहरु कसैको निजी निवास हुनेछैन । सरकारी निवासमा हुनेछैन । पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्दछ ।
४. फेरि सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
५. यो सरकारलाई वामपन्थीकै सरकारका रुपमा अगाडि लैजाने काम गर्नुपर्छ ।
६. सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नुपर्छ ।
‘के यी बेठिक कुरा हुन्?,’ कार्यकर्तालाई माधव नेपालले प्रश्न गरे । यो प्रस्तावलाई लत्याएर ओलीले फागुन २८ गते बालुवाटारमा गुट भेला राखेर विधान विपरीत काम गरेको नेता नेपालको आरोप थियो ।
यसबीचमा ओलीसँग आफ्नो छलफल भएको बताउँदै नेता नेपालले भेला रोक्न भनेको तर आफू चाँही फागुन २८ को निर्णयबाट पछि नहट्ने अहंकारका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीकै कारण पार्टीमा विग्रह आएको बताएका थिए । उनले ओलीकै कारण पार्टीमा वितण्डा मच्चिएको र पार्टी विभाजन र विसर्जनको दिशामा पुगेको आरोप लगाए ।